Myanmar OA6: အိပ်မက်ထဲမှာ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:01 PM
oh sitekar tamarr eainmat koe...
taw taw khit shay twar tal sitekar tamar pal. Ma soe buu, kyi pwar oo mal. :P
A good read, I like it.
Mr. Pooh မျက်ရည်များနှင့် ဖတ်သွားတယ် ခင်ဗျာ ။ ရယ်ခြင်း မဟုတ် ခံစားမှု မျက်ရည် တစ်ချို့ ပါ ခင်ဗျာ ။
ဝင်းဒိုးပုပ္ပါး ထွက်ရင် ပြောဦးဗျာ... သုံးကြည့်ချင်လို့ ..။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဆရာမင်းလူနဲ့ နင်လားငါလား အိုအေစစ်လားပဲ :)
စာအရေးအသားကတော့ အားကျလောက်အောင်ပါပဲဗျို့။ ကိုပွတ်ပြောတဲ့ On Touch Screen နဲ့ Voice Command တွေသုံးထားတဲ့ (ဆသရ)ရဲ့ ခေတ်လွန် ဖုန်းတစ်လုံးလောက်တော့ လိုချင်မိပါရဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒိဖုန်းက
အိတ်ထဲထည့်ထားရင် connection ကောမိရဲ့လား။ :P
ဒူးရင်းသီးနဲ့ကို မလွတ်ဘူး.. အိပ်မက်ကဘယ်တော့ဆက်မက်အုံးမှာလဲ..
Mr. Pooh yay,
အဲဒီ အိပ်မက် က ဘယ် year လဲ။ Time machine နဲ ကြို go မလို့။
၀ိုးးးးးးးး မိုက်တယ် မောင်ပွတ်.
လောလောဆယ် အိမ်မှာ မီးပျက်လို့ အင်ဗာတာလေးနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရပါတယ်ကွယ် :(
(ဖျက်လိုက်တဲ့ကော်မက်က စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ပါ- သွေ့ပုချိ)
handset အလကားပေးရင် ၂ လုံးလောက်...တလုံးက မီးထွန်းဖို့..တလုံးက ကက်ဆက်ဖွတ် ဖို့... :P မိုက်တယ်ဗျာ..
ကောင်း ပါ ပေ တယ်
မောင်ပွတ်ရေ တော်တော်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဟ။ အဲဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးသိလား။ တကယ်ကိုဖြစ်မှာ။ မကြာမီ လာမည် မျှော်………….
မိုးချစ်သူ အရင်က စာဖတ်သူ အနေနဲ့
အမှန်ဆို အကုန်လုံးကို ၀င်ဖတ်ချင်တယ်
အရင်လိုပေါ့။ အချိန်က မရလို့ပါ။
ဟုတ်ပ ကျွန်တော်လဲ ဖတ်ဖူးနေတာ မကြာသေးဘူး source ကလဲ ဘယ်ကမှန်းမသိဘူးဘဲ ပြောထားတော့ ကောင်းကြောင်း မပြောရသေးတာ။ ခုပြောမယ် ကောင်းတယ်ဗျို့
got nothing except common rumor and phenomena.
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးဗျာ.. ဖတ်ဖူးနေတာ ကြာပြီ။ ဘရားသားပွတ် လက်ရာမှန်းမသိတာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့်လည် မောင်ပွတ်ရယ်လို့ ဖြစ်နေတာကိုး....